wamkelekile inkampani yethu
Intente yomkhosi kunye nengxowa yokulala
Ingaba ententeni yakho amanzi?
Nokuba intente waterproof nje kuphela ezinxulumene ikholam amanzi angakanani laphu, awona abalulekileyo uyilo nokusetyenzwa. Ikhala lula, kodwa ke ezininzi ezintenteni imakethi ungaphumeleli ukwenza njalo, wona ekhankanywe column amanzi 5000mm. Enkosi izixhobo test imvula ngaphakathi, ezenza kube lula ukuba imvula ukukhanya kuhla nini na, oko kusinceda sikwazi ukufumana nayiphi na ithuba evuzayo ukuqinisekisa ukuba babe nako ukuvelisa ngokupheleleyo intente manzi.
Indlela yokwenza intente manzi?
Kuqala kwinto zonke, ukuba intente manzi kunxulumene kungekuphela eziphathekayo kodwa zixhomekeke kuyilo nokusetyenzwa. Ngaphambi kokuba ubeke umyalelo, u kengoku ubuze ngcono nomthengisi wakho ngayo uze ufumane impendulo ecacileyo.
Okwesibini, unokuba isivalo kunye nentente yakho isethi ukwenza yentente yakho manzi. Nceda ukhumbule ukuba umyalelo kunye ententeni yakho.
Indlela yokubona intente umntu ezingaphi?
Ngokufanelekileyo ukuze ISO5912, kukho iindidi 2 ezintenteni. Udidi A ne ubunzima iyonke umntu hayi ngaphezulu kwe 2.5kg, Udidi B ngamnye kunye ubunzima iyonke umntu ngaphezu 2.5kgs nganye. Kuba Category B, umntu ngamnye kufuneka abe indawo ubuthongo hayi ngaphantsi kwe-200 x 60cm. Kuba Category A, ubude iyonke akufanele ngaphantsi kwe 195cm, ububanzi emagxeni akufanele ngaphantsi kwe 58cm, xa intloko & iinyawo isikhundla akufanele ngaphantsi kwe 35cm. Ukuba kunzima ukuba ukukhumbula oko, nje sikhumbula ukuba umntu ngamnye kufuneka abe indawo ubuthongo hayi ngaphantsi kwe-200 x 60cm.
Indlela ukuchaza intente iyafaneleka?
Okokuqala, kufuneka zithobele umthetho apho ziya kuthengiswa, ezifana iyawulwa umlilo e North America emarikeni.
Okwesibini, ukuba umoya kwanele. ISO5912 na imfuno esekelwe ngayo. Ke intente kufuneka ziyilwe ngokwendlela lobushushu imarike ezahlukeneyo.
Okwesithathu, qiniseka intente waterproof ngaphandle kokuba ekuyileni ukuba ukucela manzi. Nantso imfuno ezingundoqo kodwa ezininzi iintente nakanjani ukuba sifezeke.
Kona, enamandla, isakhelo bhetyebhetye kunye ixesha elide.
Okwesihlanu, kuxhomekeka kwinjongo ezahlukeneyo, kufuneka ibe uyilo lokwakha ezahlukeneyo uze ukhethe izinto ezahlukeneyo. Ukuba unayo nayiphi na imfuneko, nceda qhagamshelana nathi.
Ingaba kuyimfuneko ukuba usebenzise ubukho, ukuba usebenzise ubukho njani?
Footprint yokukhusela umgangatho wentente bakho izinto ezibukhali, ezifana ilitye elwandle, somthi. Asiyiyo yonke intente kufuneka ubukho.
Xa abeke ubukho phantsi kwentente, qiniseka ukuba azinazo iindawo kuyo ngenxa yentente yakho, kuba xa kusina, amanzi unokufumana phezu kwendawo ziqhube ngaphantsi ententeni yakho bathele umgangatho wentente.
Ngaba uyazi ukuba bangaphi uhlobo izakhiwo zokuthunga of ibhegi yokulala? Yintoni umahluko?
Yintoni ukwakhiwa lokuthunga bag zakho zokulala? Ngaba loo mthombo kufanelekile ukuba injongo yakho? Ngaba nomthengisi wakho ndinixelele apho ukwakhiwa sisetyenziselwa ibhegi zakho zokulala kunye inkalo zokwakha nganye? Ngokuqhelekileyo, kukho 2 izakhiwo ezahlukileyo kwimarike, egumbini H kunye kabini H kwegumbi.
I-H Chamber na ulwakhiwo elula futhi ethandwa, ukuthunga iqokobhe, yokwambathisa akhande kunye ngqo. Le yokwakha luqhele ukusetyenziswa njengezibonelo zasehlotyeni-intwasahlobo
H gumbi kabini , nto leyo kakhulu ethandwa esetyenziselwa ibhegi kubushushu obuphantsi yokulala. Kukho 2 maleko ezahlukeneyo, engaphandle umaleko Sew iqokobhe & enye inwebu ubushushu kunye langaphakathi ezikroziswayo Sew kanti omnye ngomaleko yokugquma kunye, ngoko bethunga maleko-2 kunye. Le ukwakhiwa H kabini ukuze abe ubushushu kunye nokusebenza ngaphezu H egumbini ukugcina ingxowa ilele ezifudumeleyo. Emva ezininzi kovavanyo yokwambathisa thermal with "dummy thermal", sifumanisa apho iseyi "Points Cold", ngoko ke sisebenzisa oluphuculiweyo ukwakhiwa H kabini.
Ukuphuculwa kwegumbi eliphindwe kabini le-H, as it’s name shows, it’s improved based on double H chamber. The sewing line on double H for both 2 layers are at same level, thermal will loss through these “cold pints”. In order to solve this problem, we designed this improved double H chamber.
Ngaba bag zakho zokulala ngamanzi?
Ukuba umntu othile ndithi kuni bag sleeping waterproof, kufuneka ucinge ukuba / yona kulo. Ibhegi yokulala kufuneka NOT amanzi, nto kufuneka ube mathumbu, amanzi kunye nomoya. Ukuba ingxowa yokulala waterproof, kuyobe nomoya kuphela ilaphu elithile kwinqanaba eliphezulu kakhulu. Umboleki ukubila kwaye azive engonwabanga kakhulu.
Siye izikhalazo ezininzi iingxaki uziphu kwi ingxowa yethu yokulala, ngaba unayo nayiphi na isisombululo?
ukusebenza uziphu kwi ibhegi yokulala ezinxulumene umgangatho uziphu nokulala zokuyila ingxowa. Sinento uziphu nomgangatho elungileyo kakhulu kodwa kuphela kuxabisa 30-40% of YKK uziphu. Ukuba umntu othile ndithi kuni uziphu wabo okulungileyo, nceda musa ukuvavanya uziphu kuphela, uza uvavanyo bhetele uziphu kwi ibhegi yokulala.
Oku kuxhomekeka kulwakhiwo ibhegi yokulala ezahlukeneyo izinto ezahlukileyo esetyenziselwa. Nceda uzive ukhululekile usazise xa ufuna umatshini ibhegi zihlambeke yokulala.
Ngaba ingubo yakho nepikiniki na umatshini zihlambeke?
Thina umatshini zihlambeke zepikniki ingubo, kodwa hayi zonke ingubo sepikiniki nto mashing zihlambeke. Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha.
Indlela ukuqinisekisa umgangatho yakho imveliso? Yintoni Kulinganiselo usenzile?
Thina umthetho engqongqo ukuze zihlolwe. Zonke izixhobo ziya kuhlolwa kwaye zonke kweemveliso ezigqityiweyo ziya kuhlolwa omnye omnye phambi ngolwandle. Unga uyazi ukuba umxhasi wakho ukwenza uhlolo iimveliso zakho ngokujonga ukuba kukho iqhekeza emiselweyo. Oku akwenzeki ukuba i-100% iimveliso zabo kumkhawulela umgangatho.
Ngaba iimveliso wakho wemichiza simahla kunye nendalo?
Uninzi iimveliso zethu nendalo. Kodwa emarikeni ezahlukeneyo iye ezahlukeneyo imfuneko, nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha. Unako kwakhona sazise emarikeni yakho target, siya kunika ulwazi ngokufanelekileyo.
Ngaba unikela elona xabiso lisezantsi kwi emarikeni?
Ndicinga ukuba kungenzeka ukhetho lwakho elungileyo ukuba wena ingqwalasela ixabiso kuphela. Sinokuba zinika ixabiso ukhuphiswano kakhulu ngokusekelwe kuyilo kwimveliso elungileyo kunye nomgangatho imveliso entle.
Yintoni ubuncinane ubungakanani lakho ukuze?
Le ubungakanani oda lincinane zixhomekeke izinto kunye neenkcukacha imveliso ezahlukeneyo. Ngesiqhelo ukusuka 500pcs ukuya 2000pcs, ezinye izinto kakhulu, omnye kancinane. Nceda uqhagamshelane nathi ngento nganye ezahlukeneyo.
Ewe, sibe igqiza elomeleleyo abasakhulayo. Iimveliso iye yangeniswa ngokwendlela isicelo sakho.
Kuba iisampuli, ixesha yipeyinti malunga 7 iintsuku. Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 45-60 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Ixesha phambili ngempumelelo xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu ukhokelo azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho kunye nabasebenzi bethu. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Yintoni na intlawulo yakho isixhobo intlawulo?
elide Intlawulo: 30% imali kwangaphambili,-70% eseleyo nxamnye ikopi B / L kunye iintsuku ezili-10.
isixhobo Intlawulo: TT, L / C, union Western & Paypal.
Iindleko yokuthumela ixhomekeke kwindlela okhetha ukufumana impahla. Express yokuya kodwa ndlela kuyabiza. Elwandle yeyona simse umthamo omkhulu. Maxa wambi, ngololiwe. Ngqo amazinga impahla ifumaneka kuphela xa siyazi iinkcukacha umthamo, ubunzima kunye indlela inqanawa. Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana ingcaciso engaphezulu.
Hayi 168-3, indlela North Qingyang, Changzhou, Jiangsu kwiphondo, China
3600pcs 3 ixesha lokulala ibhegi ukulungele s ...
Enye indlela yokusonga zonke iintente ezi-2
Enye indlela yokusonga zonke iintente ezivelayo
Yenza intente entsha
© Copyright - 20108-2020: Onke amalungelo agciniwe.